HP ल्यापटपको ब्याट्री हटाउने र एक नयाँ बदल्न कसरी? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
8 सक्छ, 2021 8 सक्छ, 2021 एल्सा विवाह ब्लग, प्रविधि
पछाडि बोर्ड मा केहि रबर खुट्टा हुन सक्छ कि तपाईले ब्याट्रीमा पुग्न सक्नु अघि यसलाई हटाउनु पर्छ।
ठूलो र ठूलो यो गर्न गाह्रो छैन यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि एक स्क्रूड्रिभर के हो।
सामान्यतया, यदि तपाइँको ल्यापटप ब्याट्री एक प्रतिस्थापन को लागी र एक मर्मत पसल मा यो तपाइँको को लागी एक असुविधा हो, तपाइँ सजिलै संग आफ्नो घर को आराम बाट प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यस HP ल्यापटप ब्याट्री प्रतिस्थापन कसरी गर्ने, हामी एक सफल नतीजाको ग्यारेन्टी लिनको लागि हामी तपाईंहरूलाई लिनेछौं। उत्तम प्रक्रियाको लागि एक सेवा म्यानुअल परामर्श गर्न उत्तम, तर ठूलो र ठूलो यो गर्न गर्न गाह्रो छैन के तपाईंलाई थाहा छ भने एक स्क्रूड्रिभर के हो।
चरण १. तपाईको ल्यापटप स्विच गर्नुहोस् र बल स्रोतबाट विच्छेद गर्नुहोस्।
यो एकैसाथै सब भन्दा सजिलो अग्रिम हो यद्यपि यसले पुनः पुनःप्रदर्शन गर्दछ। साथसाथै तपाईको ल्यापटप पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै, तपाईले निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईले यसलाई श्रोत स्रोतबाट टाढा राख्नु भएको छ। यदि होईन भने, तपाई आफैंलाई एक बिजुली सदमेमा चोट पुर्‍याउने वास्तविक खतरामा पर्नुहुनेछ।
चरण २ पछाडि प्यानल हटाउनका लागि स्क्रूड्रिभर प्रयोग गर्नुहोस्।
धेरै HP ल्यापटप को ब्याट्री प्रतिस्थापन को लागी पछाडि बोर्ड को प्रतिस्थापन को आवश्यकता छ। यसले संकेत गर्दछ कि तपाईंले श्रोतहरूलाई फिलिप्स हेड # ० स्क्रूड्रिभर वा ल्यापटप खोल्ने इकाईमा राख्नुपर्दछ, जसमध्ये दुई सस्तो छन् र नयाँ ब्याट्री धेरै कम जटिलको रूपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ।
पछाडि बोर्ड मा केहि रबर खुट्टा हुन सक्छ कि तपाईले ब्याट्रीमा पुग्न सक्नु अघि यसलाई हटाउनु पर्छ; तथापि यो तपाईंको ल्यापटपको मोडेलमा निर्भर गर्दछ। प्लास्टिक खोल्ने उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस् वा तपाईं रबरलाई छाँटकाँट गर्न गितार छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई तपाईंको ल्यापटपको बडि सँगै राख्ने स्क्रू हटाउन अनुमति दिनेछ।
पछाडि बोर्डमा स्क्रूहरू खोल्नको लागि स्क्रूड्रिभर प्रयोग गर्नुहोस् र त्यस पछि तपाईको ल्यापटपको पछाडि अगाडि कोमलता हटाउनुहोस्। यसले तपाईलाई प्लास्टिकको उपकरण फेरि किनारहरू सुस्त बनाउन प्रयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छ।
सामान्यतया यो कुनाको कुनामा सुरू गर्न सरल छ र सावधानीपूर्वक बोर्डलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, तैपनि निश्चित गर्नुहोस् कि खण्डहरू भित्रबाट चोट नपु .्याउनमा ध्यान दिनुहोस्।
चरण 3.. ल्यापटप ब्याट्री हटाउनुहोस्।
ल्यापटपको शरीरको भित्र तपाईंको ब्याट्री स्थान समातेको स्क्रू अनस्क्रु गर्न स्क्रूड ड्राईभर प्रयोग गर्नुहोस्। यो रिलिज पछि, तपाइँले केबल छुट्टिनु पर्छ जुन तपाइँको ब्याट्री तपाइँको प्रणालीमा मिल्दछ।
यी भागहरू कमजोर छन् भनेर आधारमा यसो गर्दा होशियार हुनुहोस् र तपाईंले ती हानि गर्ने सम्भावित मौकामा गडबड गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईंको उपकरणबाट ब्याट्री हटाउने प्रयास गर्नुहोस्।
नयाँ ब्याट्री लिनुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो कुनै प्लास्टिकको खाली हो। जाँच गर्नुहोस् कि यो निश्चित रूपमा तपाईंको ल्यापटपको लागि सही ब्याट्री हो त्यसैले यसले कुनै समानता समस्या उत्पन्न गर्दैन। तपाईको ल्यापटपमा अन्तरिक्षमा ब्याट्री स्पट गर्नुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो उपयुक्त छ।
चरण your. तपाईको नयाँ ब्याट्री तपाईको ल्यापटपको मुख्य भागमा जडान गर्नुहोस्।
अब, तपाई नयाँ ब्याट्री जडानको प्रक्रिया सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले नयाँ ब्याट्री ठीक गरेपछि तपाईले तपाईको ल्यापटप फेरि चलाउनको लागि जे ठीक भयो त्यसको उल्टो सुरू गर्नुपर्दछ।
चरण the. पछाडि प्यानल बदल्नुहोस्।
पछाडिको कभरलाई बाँकी ल्याप्टपमा लाइन लगाउनुहोस्। स्क्रु ड्राईभर प्रयोग गरेर कभर फिर्ता गर्नुहोस्। एकपटक, तपाईं होशियार हुनु आवश्यक छ ताकि चीजहरूलाई धेरै नजिक वा अत्यधिक स्वतन्त्र नबनाउनको लागि, संभवतः एकले गर्न सक्ने तथ्यको प्रकाशमा। तपाईंको उपकरणलाई हानी पुर्‍याउनुहोस्। तपाईंको ल्यापटपको तल्लो भागमा रबर फुटिंग बदल्नुहोस् यदि तपाईंको ल्यापटपमा तिनीहरू छन् भने।
चरण a. नयाँ ब्याट्री रिपोर्टको साथ प्रदर्शनको पुष्टि गर्नुहोस्।
एक पटक सबै व्यवस्थित र फिर्ता एकत्रित भएपछि, तपाईंको ल्यापटपलाई पावर स्रोतमा प्लग गर्नुहोस्।
केहि क्षण चार्ज भए पछि, तपाईंको ल्यापटप खोल्नुहोस् यो निश्चित गर्न सबै कुरा ठीकसँग सुरु हुन्छ। यदि तपाईंको ल्यापटपले उपयुक्त रूपमा काम गरिरहेको छु भन्ने प्रभाव दिन्छ भने, तपाईंले अर्को ब्याट्री रिपोर्ट खेल्नु पर्छ तपाईंको डिजाइन क्षमता के हो हेर्नका लागि र यदि त्यो सबै कुरा तपाईंले अपेक्षा गर्ने ढ looks्गले देख्दछ भने। यदि यसले गर्छ भने, तपाईं उचित ब्याट्री जीवनको साथ तपाईंको ल्यापटप फेरि प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ।
तपाईको एचपी ल्यापटप ब्याट्री हटाउनु एक यस्तो गतिविधि हो जुन यत्ति जटिल छैन यदि तपाईंलाई स्क्रू र ग्याजेटहरूमा तपाईको बाटो थाहा छ। यदि तपाईले याद गर्नुभयो कि तपाईको ल्यापटपको ब्याट्री स्वास्थ्य घट्यो भने, त्यो तपाईको क्यू हुनु पर्छ।
त्यसो भए, माथिको चरणहरू अनुसरण गरेर, तपाईं सफलतापूर्वक hp ल्यापटप ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तर, यदि तपाईं प्रक्रिया आफैंमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ल्यापटप मर्मत सेवामा सम्पर्क गर्नै पर्दछ, र विज्ञको परामर्श लिनु पर्छ। ती जहिले तपाईलाई एचपी ल्यापटपबाट ब्याट्री हटाउने उत्तम तरिकामा सहयोग पुर्‍याउँछन्।
ब्याट्री सांप्रदायिक समाचार hp ल्यापटप
हामी मुख्य रूपमा ल्यापटप ब्याट्री, एडेप्टर र चार्जर बेच्दछौं, तपाईंलाई उत्तम ऊर्जा समाधान प्रदान गर्न। हाम्रा सबै आईटमहरू सिधै विश्वभरि बिभिन्न प्रतिष्ठित निर्माताहरूले खरिद गरेका छन्। US SITE: https: //www.replacement-battery.com/FR SITE: https: //www.egros01.com